China Famokarana Titanium Dioxide famokarana sy orinasa | Noelson
NOELSON ™ Brand Conductive Titanium Dioxide EC-320 dia vokatra mitambatra mifototra amin'ny titanium avo lenta dioksida, fanodinana amin'ny alàlan'ny fitsaboana amin'ny alàlan'ny nanotechnology, dia taranaka faha-2 ekena andian-tsarimihetsika conductive. Amin'ny maha fitaovana fitaovana conductive vaovao azy, EC-320 dia manana tombony maro, toy ny: loko maivana, mora miparitaka, azo ampiharina malalaka, mora mitondra, anticorrosion, mitaredretra, miafina tsara hery sns ... Ampiasaina soloina ny vokatra hafarana lafo any ivelany. Nandritra ny taona maro, mandalina lalina amin'ireto isika eny an-tsaha ary mahazoa fandrosoana maharitra Ny kalitaon'ny vokatra dia manana toerana lehibe any Shina.
NOELSON ™ EC-320 (C), dia karazana ankapobeny.
Toetoetra Mahay manaparitaka hazavana, mamirapiratra tsara, fotsy sy hery miafina
Thermo Stability ℃ ≥600-800
Fahamendrehana simika Tohero ny solika asidra, alkaly ary organika; Tsy misy oksidra; Fihemorana mampirehitra
Haben'ny sombiny (D50) ≤5um
Density g / cm3 2.8-3.2
Fitrohana solika ml / 100g 35 ~ 45
Fanoherana Ω · cm ≤100
►Ny EC-320 (C) dia be mpampiasa amin'ny coatings, plastika, rubber, adhesive, ranomainty, taratasy manokana, fitaovana fananganana, karazana fitaovana mitambatra, fibre lamba, vokatra elektronika, indostrian'ny tanimanga, sns.
►Condo Titanium Dioxide dia azo atao ho an'ny vokatra fotsy, na vokatra maivana mitarika maharitra, antistatic. Mihatra indrindra amin'ireo vokatra conductive sy antistatic manana fepetra takiana amin'ny fotsifotsy. Azo ampiasaina amin'ny fanaovana vokatra loko hafa koa raha ampiana loko. Rehefa mihalehibe sy mihalehibe ny sehatry ny fampiharana ny molekiola, ny faritra mila fitsaboana conductive sy antistatic dia mihamaro hatrany. Noho izany dia azo ampiasaina be dia be ny andiana vovoka conductive maivana.
►Ny fahombiazan'ny conductivity ny fitaovana conductive sy antistatic dia miankina amin'ny teknolojia fanodinana sy ny mpameno, resin, promoter, solvents mifandraika amin'ny formule, misy fiantraikany amin'ny fahombiazan'ny vokatra mifono ao amin'ny rafitra coating. Amin'ny ankapobeny, raha ampiana 15% ~ 25% (PWC) ny titanium dioxide mitondra tena, ny resistivity dia mety hatramin'ny 105 ～ 106～ • cm.
► Ny tsy fitoviana eo amin'ny dioxide titanium conductive sy ny vovo mica conductive: Tsara kokoa raha vovoka mika conductive flaky ampiasaina amin'ny rafitra firakotra sy ny ranomainty. Mifanohitra amin'izany, tsara kokoa raha dioxide titanium conductive spherical na acicular ampiasaina amin'ny rafitra rubber sy plastika. Raha ny marina, ny endrika sy ny haben'ny mixeur vovoka conductive dia azo ampiasaina mba hahatratrarana ny fahaiza-mitarika tsara kokoa. Ohatra, ny tahan'ny fifamatorana mica conductive sy ny titanium dioxide conductive: 4: 1 ~ 10: 1. Ny satan'ny famenoana dia mety hisy fiantraikany mivantana amin'ny fahombiazan'ny fitarihana, ny famenoana tsy ara-dalàna dia misy fiantraikany tsara kokoa noho ny famenoana matetika, dia azo hazavaina amin'ny faritra ifandraisana. Ny fifangaroan'ny vovo-dronono mifangaro Conductive sy ny vovoka mica konductive dia hanatsara ny fahombiazan'ny herinaratra amin'ny famokarana rehefa manamboatra fonosana antistatika, ary mampihena ny vidiny. Ny fifangaroan'ny spherical sy acicular ampiasaina dia afaka manova ny famenoana ny vovoka conductive, endrika fifandraisana bebe kokoa azo: flake miaraka amina flake, flake miaraka amin'ny teboka ary teboka miaraka amin'ny teboka, noho izany dia nihatsara ny fahombiazan'ny fitarihana herinaratra.
► Eo ambanin'ny sanda maha-zava-dehibe, ny fanatanterahana zavatra dia hohatsaraina amin'ny fitomboan'ny habetsahan'ny vovoka conductive, ary aorian'io fotoana io dia hanomboka hihena na ho ambany ny fitarika.
NOELSON ™ Brand conductive & and anti-static agents series, no mpanamboatra fampandrosoana ankehitriny miaraka amin'ny maodely feno ho an'ny fampiharana sy fampiroboroboana ny vokatra vovo-dronono sy fitaovana any Shina ary manana fitaomana betsaka any an-toerana sy any ivelany. Ny vokatra rehetra omenay dia manana kalitao tsara sy vidiny mifaninana. Ankoatry ny vokatra omenay, izahay koa dia manome serivisy ara-teknika sy mpanjifa ary logistic ho an'ny mpanjifa rehetra.
10-25KGS / Kitapo na 25KGS / Taratasy Tube 14-18MT / 20'FCL Container.
Teo aloha: Alimine phosphate zinc
Manaraka: Superfine Ferro-phosphorous Powder